लाफिङ्ग बुद्धलाई यो देशमा मान्छन् भगवान्, यस्तो छ हाँस्नुको रहस्य ! – Namaste Dainik
June 23, 2020 July 20, 2020 NamastedainikLeaveaComment on लाफिङ्ग बुद्धलाई यो देशमा मान्छन् भगवान्, यस्तो छ हाँस्नुको रहस्य !
काठमाडौं । हामीले बजारमा बेच्न राखिएको लाफिङ्ग बुद्धको मूर्ती त देखेका नै छौँ । मानिसहरु लाफिङ्ग बुद्धको मूर्तीलाई आफ्नो घरमा राख्ने गर्छन् । लाफिङ्ग बुद्धको मूर्ती घरमा राख्दा सुख, समृद्धि र भाग्य चम्किने विश्वास गरिन्छ ।तर के तपाईलाई लाफिङ्ग बुद्ध को थिए भन्ने थाहा छ ? साथै हाँस्नुको कारण के हो ? यदि थाहा छैन भने हामी यसको बारेमा जानकारी दिन्छौँ ।
महात्मा बुद्धका होतेई नाम गरेका एक शिष्य थिए । उनले महात्मा बुद्धसँग जब सबै ज्ञान सिके तब उनी जोडले हाँस्न थाले ।उनले बुद्धसँग सबै ज्ञान लिएपछि आफ्नो जीवनको एक मात्र लक्ष्य हाँस्नुलाई बनाए । भनिन्छ उनी जहाँ गएपनि त्यहाँका मानिसहरुलाई आफ्नो पेट देखाएर जोडले हाँस्ने गर्दथे ।त्यसपछि जापान तथा चीनका मानिसहरुले उनलाई हाँनेवाला बुद्धका नामले बोलाउँन थाले । त्यसैलाई अंग्रेजीहरुले लाफिङ्ग बुद्धका नामले चर्चित बनाईदिएका हुन् ।
उनका अनुयायी तथा शिष्यहरुले उनको हाँसोको सन्देश बिभिन्न देशमा फैलाउँन शुरु गरे । अझ चीनमा त उनका अनुयायीहरुले लाफिङ्ग बुद्धलाई यसरी प्रचार गरेकी त्यहाँका मानिसहरु भगवान मान्न थाले ।चीनका मानिसहरु लाफिङ्ग बुद्धलाई पुताईका नामबाट चिन्ने गर्छन् । लाफिङ्ग बुद्धको मूर्ती घरमा राख्दा सुख र समृद्धि तथा भाग्य चम्किने कुरामा उनीहरु विश्वास राख्छन् ।एजेन्सीको सहयोगमा
२४ घण्टा पनि टिकेन कोरोना निको पार्ने रामदेवको मेडिसन ।
ॐ ॐ ॐ जिवनमा धन,सम्पती र खुसी पाउन यो दुर्लभ दाहिने शंख दर्शन गरि यसको महिमा पढी शेयर गरौ !
May 6, 2020 May 6, 2020 Namastedainik
रिठ्ठेभिरमा ऐना भित्र लुकेको यस्तो डरलाग्दो रहस्य: रहस्यमय भीरले कसरी निल्यो यति धेरै यात्रु ?-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
ज्योतिषशास्त्र अनुसार मंगलबार भुलेर पनि नगर्नुहोस यस्ता कामहरू
May 12, 2020 Namastedainik